ဆုတောင်းလေးတွေပြောင်းလိုက်ပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ဆုတောင်းလေးတွေပြောင်းလိုက်ပါ။
Posted by ခင်ခ on Dec 3, 2012 in Facebook, Other - Non Channelized | 14 comments
ဖေ့ဘုတ်က Mandalay Voice မှာဖတ်ရတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ဖတ်မိပြီးသဘောကျတာနဲ့ ပြန်မျှဝေလိုက်တာ ဖတ်ကြည့်စေချင်လို့လေ။
ဘုန်းကြီးတို့ အင်္ဂလိပ်စာ နည်းနည်းလေးအဆင့်မြင့်မြင့် သင်မိတဲ့အချိန်မှာ The dictionary of
synonym ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို သင်ရတယ်။ အဲဒီထဲမှာ Abominable ဆိုးသော ၊ Execrable ပို၍ဆိုးသော ၊ Detestable အလွန်သာ၍ဆိုးသော။ Degree တွေက တစ်ခုထက် တစ်ခုမြင့်သွားတယ်။ အဲဒီ စကားလုံး ၃ လုံးအကြောင်းကို အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ Story လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ ရှင်းပြထားတယ်။
ဘီစီ ၅၀၀ လောက်တုန်းက ဒင်နိုနီးရှား ဆိုတဲ့ မင်းတစ်ပါးဟာ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ အနီးအနား မြေထဲပင်လယ်နားက ကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းမှာ အုပ်ချုပ်တယ်။ အဲဒီ ကျွန်းလေးနာမည်က စစ္စလီကျွန်း။ အဲဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာ အဲဒီမင်းကြီး အုပ်ချုပ်တယ်။ မင်းကြီးနာမည်က ဒင်နိုနီးရှား။ အဲဒီမင်းက သိပ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်။ ခရစ်မပေါ်သေးခင်ဆိုတော့ အဲဒီရောမ ပတ်ပတ်လည်မှာ လူတွေဟာ နတ်အမျိုးမျိုးကို ကိုးကွယ်ပြီးတော့ နတ်ကျောင်းတွေရှိတယ်။ တို့ တောင်ပြုန်းရွာကို သွားလိုက်လို့ ရှိရင် တစ်ရွာလုံး နတ်ကျောင်းကြီးပဲ။ နတ်ကွန်းကြီးပဲ။ အဲဒီလိုပေါ့။ အဲဒီတော့ တိုင်းသူပြည်သား လူအများက အဲဒီနတ်ကွန်းတွေထဲ သွားသွားပြီးတော့ ဆုတောင်းကြတယ်။ အခု တိုင်းပြည်က ဘုရင်က အလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လို့ အဲဒီ ဘုရင် အသက်မရှည်ပါစေနဲ့ ။ မြန်မြန်သေပါစေဆိုပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေက ၀ိုင်းဆုတောင်းကြတယ်။ အဲဒီ ဘုရင် မကြာခင်သေတာပဲ။
ဟော……….နောက် ဘုရင် တစ်ပါးထပ်တက်လာတယ်။ သူက အရင် ဘုရင်ထက် ပိုပြီးရက်စက်တယ်။ ပိုဆိုးတယ်။ အဲဒါကြောင့် တိုင်းသူပြည်သား လူအများ အဲဒီ နတ်ကျောင်းတွေ နတ်ကွန်းတွေထဲသွားပြီး ဆုတောင်းကြပြန်တယ်။ အဲဒီ ဘုရင်ဆိုးကြီး မြန်မြန်သေပါစေ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဲဒီအခါ အဲဒီဘုရင်လည်း သေသွားပြန်ရော်။ ဆုတောင်းက တယ်ပြည့်တာကိုးကွ။ မင်း ၂ ပါးသေသွားတယ်။
ဒါနဲ့ နောက် တတိယတစ်ကောင် ထပ်တက်လာပြန်တယ်။ အဲဒီအကောင်ကျတော့ အဆိုးဆုံးအကောင်ဖြစ်နေတယ်။ အဆိုးဆုံး ဘုရင်ပေါ့ကွာ။ အဲဒီတော့ တိုင်းသူပြည်သားတွေက စဉ်းစားတယ် ၊ တို့ ဘယ်လို ဆုတောင်းရင် ကောင်းမလဲ။ ပထမဆုတောင်းလည်း ပြည့်တယ် ၊ ဆိုးတဲ့ကောင် သေသွားတယ်။ ဒုတိယ ဆုတောင်းလည်းပြည့်တယ် ၊ ပိုဆိုးတဲ့ကောင် သေသွားတယ်။ အခု တတိယတစ်ကောင်လာတော့ ဘာဖြစ်လဲ။ လူတွေ အသက်ရှုဖို့ တောင် မလွယ်တော့ဘူး။ ဟာ………..ဒီတစ်ခါတော့ တို့ ဆုတောင်းပြောင်းရင် ကောင်းမယ်။ အဲဒီလိုဆိုပြီးတော့ ဘုရားကျောင်းထဲမှာ အကုန်စုပြီးတော့ ဆုတောင်းကြတယ်။
အဲဒီမှာ အဖွားအိုကြီးတစ်ယောက်က ဦးဆောင်ပြီးတော့ အသံအကျယ်ကြီးအော်ပြီးတော့ ဆုတောင်းတယ်။
“အဆိုးဆုံးဘုရင်ကြီး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ။”
အဲဒီအချိန်မှာ ဘုရင်ကြီးက ရုပ်ဖျက်ပြီး အဲဒီ ဘုရားကျောင်းထဲက ဆုတောင်းတဲ့ သူတွေကြားထဲ ၀င်ထိုင်နေတယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီမှာ ဘုရင်ကြီးက တိုင်းပြည်က ငါ့ကို မေတ္တာဘယ်လောက်ထားလဲဆိုတာသိလိုက်ပြီ။ အကုန်လုံးက သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေချည်း ဆုတောင်းနေကြတယ်။ ထူးတော့ ထူးဆန်းတယ်ဟေ့။ ငါ့လောက် ဆိုးတဲ့ကောင်လည်းမရှိဘူး။ ငါ့လည်း သက်တော်ရာကျော်ရှည်ဖို့ ဆုတောင်းနေကြတယ်။ ဒါကြီးကတော့ ထူးဆန်းနေတာပဲ။
သူလည်း သူ့ ဟာသူတော့ သိသား။ ငါ့ထက်ဆိုးတဲ့ကောင်လည်း မရှိတော့ဘူး။ ငါ့လည်း အသက်ရှည်ဖို့ ဆုတောင်းနေတယ်။ မဖြစ်သေးဘူး။ ငါမေးအုံးမှပဲ ဆိုပြီးတော့ အဖွားအိုကြီးတစ်ယောက်ကို ကပ်မေးတယ်။
“အဖွားရေ ကျုပ်မေးခွန်းတစ်ခုလောက် မေးချင်တယ်။ ပထမဆုတောင်း ဘယ်လိုတောင်းခဲ့သလဲ။”
ဆိုးသော ဘုရင်ကြီးသေဖို့ ။ သေသွားတယ်။
ပို၍ဆိုးတဲ့ ဘုရင်တက်လာတယ်။ သေဖို့ ဆုတောင်းတယ်။ သေသွားတယ်။
“အခု အဆိုးဆုံး ဘုရင်တက်လာတယ်။ ဘာကြောင့် အသက်ရှည်ဖို့ ဆုတောင်းနေတာလဲ အဖွားရဲ့ ။”
ဟ………အဲဒီ အဆိုးဆုံးအကောင်ကို သေပါစေလို့ ဆုတောင်းရင် နောက် စတုတ္တတက်လာမယ့်ကောင်က သူ့ ထက်ဆိုးမှာကြောက်ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီ အဆိုးဆုံးကောင်လေးနဲ့ ပဲ နေပါရစေတော့။ သူ့ ထက်ဆိုးတဲ့ကောင်တက်လာရင် တိုင်းပြည်မှာ လူကျန်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဒီအဆိုးဆုံး မင်း နဲ့ ပဲ နေပါရစေဆိုပြီးတော့ ဆုတောင်းနေတာပါဆိုတော့ အဲဒီအခါ မင်းကြီးက အော်……….တိုင်းပြည်က လူတွေက ငါ့ကို ဒီလောက်ဆုကောင်းကောင်း တောင်းပေးနေရင် ငါဆိုးလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ အဲဒီအခါကျမှ မင်းကြီးဟာ ကောင်းသွားတော့တယ်တဲ့။
သီတဂူဆရာတော်ကြီး အရှင်ဥာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူသော “ဆုတောင်းပြောင်းလိုက်ပါ” တရားတော်မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်ခင်ဗျာ။
မနက် ၁ နာရီ
“ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူများ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေဗျာ။ ´´
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူများ အတွက်ကတော့ ကိုယ်ထိုက်နဲ့ ကိုယ်ကံဖြစ်ပါစေခင်ဗျား။
ကျုပ်ရဲ့ယူဆချက်တစ်ခုကတော့ . . . . . . . . .
တန်ဖိုးထားစရာ ကောင်းတဲ့လူတွေ ၊ လူအများချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို ခံရတဲ့လူတွေဟာ
အသက်တိုတတ်ကြတယ် . . . . .
တချို့တလေများကျတော့လည်း ဆုတောင်းစရာမလို auto အသက်တွေက
ရှည်လိုက်တာ တချို့တလေ ဆိုးသွမ်းသူတွေကိုပြောတာပါ ……
ဦးဆုံးကွန်မန့်ပြုသူ ကိုMobile ရဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် တောင်းဆုလေးလည်းပြည့်ပါစေဗျာ။
အန်ကယ်ကြီးရဲ့ အတွေးလေးတွေ လူတိုင်းမှာသာရှိရင် ကောင်းမှာဘဲလို့တွေးမိတယ်လေ။
မဂျူးလိယက်ရေ ဒါကလည်းသူတို့ကုသိုလ် သူတို့ကံတရားပေါ့ဗျာ။ မနာလိုစရာမရှိပါဘူးနော့။
ကိုပေါက်ရေ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ရှည်ကြစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ အသက်ရှည်ခြင်းကလည်း အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဘဲမဟုတ်လားဗျ။
မောင်ပေ .. မြန်မြန်သေဘာစေ ..
အဲ .. မဟုတ်သေးဘူး ..
တော်ကြာ .. သူ့ထက် ဘူးတဲ့လူ ပေါ်လာမှ ..
ဒီတော့ … ဒီလိုလုပ် …
မောင်ပေ .. သက်ကျော်ရာကျော် မြန်မြန် ရှည်ဘာစေ …
အသက် မြန်မြန်ရှည်တော့ အဖိုးကြီး ဖြစ်သွားရော ..
ဘူမှ ကြိုက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး .. ငွင်း .. ငွင်း …
အထက်က စာကို ဖတ်ရှုရင်းနဲ့ပဲ ..
ဝင်ရောက် နောက်ပြောင်သွားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ………..
ဦးမာဃ ကတော့ ဆုမတောင်းဘူး
မေတ္တာ ပဲ ပို့တယ်
ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး ပေါ့လေ
ဒီ Story ကအခုမှဘဲဖတ်ဖူးတယ် …
ဂဇက်သဂျီးဦးခိုင် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ….
ရွာသူားအပေါင်း သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ….အဟိ
ဝမ်ဆွေ့ ဝမ်ဆွေ့ ဝမ့်ဝမ့်ဆွေ့….ဝယ်………………….ဝူ………………………